Madaxwaynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa oo gaaray Caasimadda Turkiga ee Ankara – Radio Daljir
Madaxwaynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa oo gaaray Caasimadda Turkiga ee Ankara
Luulyo 9, 2018 6:16 b 0
Madaxwaynaha Dowladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray caasimadda Turkiga ee Ankara.
Wafdiga madaxwaynaha ayaa waxaa ka mid ah wasiiru dowlaha arimaha dibadda Soomaaliya, wasiiru dowlaha ganacsiga iyo gaashaandhigga iyo saraakiil kalle.
; “Madaxweynaha waxa uu halkan u yimid inuu ka qeyb qaato waaga cusub ee u baryaya walaalaheenna reer Turkiya keddib natiijadii doorashadii madaxtinnimo, waxaana rajeynaynaa in xiriirka soojireenka ah ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiya heerka uu haatan taaganyahay inuu kasii xoogeeysto.”ayuu yiri agaasimaha warfaafinta ee madaxwaynaha Soomaaliya oo ka mid ah wafdiga madaxwayne Farmaajo.
Magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa waxaa maanta lagu caleema saarayaa madaxwaynaha Turkiga Recep Tayib Erdogan, iyadoona sidoo kalle ay ka qaybgalayaan hogaamiyeyaasha dalalka Rusia, Cuba, Venesuala, Qatar iyo madax kasocda dunida intiisa kalle.
Itoobiya iyo Eriteriya oo ku heshiiyay darbiga labada dal inay ku badalaan buundo xiriirisa